Fisandratana : Naharesy lahatra an’i vohipeno -
AccueilRaharaham-pirenenaFisandratana : Naharesy lahatra an’i vohipeno
Vahoaka an’alin-kisa hatrany no nanototra ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny fitetezana ny faritra Vatovavy Fitovinany mitondra ny « vinan’ny fisandratana ». Vohipeno izay tanàna tsy vaovao amin’ ny filoha ankehitriny, satria raha tsiahivina nandritra ny lamesa lehibe izay notanterahina tany an-toerana, izay nanandratana ho olon-tsambatra an’i Ramose Lucien Botovasoa dia efa nisy ny fitsidihana izay notanterahin’ i Hery Rajaonarimampianina. Tsapa fa efa tamin’ io fotoana io no efa nangetaheta ny fitsidihana sy ny fanazavana izay hoentin’ ny filoha Hery Rajaonarimampianina mikasika ny Fisandratana ny mponina any an-toerana. Avy hatrany moa dia ny tombontsoa ho azon’ ny mponina miainga amin’ ny asa izay efa natomboka no nohazavain’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, ka anisan’izany ny fambolena izay mampalaza ny faritra. Nambaran’ ny filoham-pirenena noho izany fa ny « fisandratana’’ dia ahafahana mahazo asa maro, miainga amin’ ny sehatra fototra fito toa ny harena an-kibon’ ny tany, Jono, Indostria, Fambolena, Fizahan-tany ary ny sehatra tsy miankina sns.
Nandritra ny fanazavana izay nentin’ ny filoham-pirenena moa dia tsy misy ho diso anjara ny rehetra amin’ ny « tetikasan’ny fisandratana » satria raha ny sehatry ny fambolena fotsiny ihany no jerena dia mahatratra hatrany amin’ny 1 500 ny asa izay hiforina amin’ izany, ho an’ ny Indostria kosa dia 300, ny lafiny jono dia asa 350 no vinavinaina fa hiforona, ny fizahan-tany dia 500 000. Nohamafisin’ ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa “ mila mametraka fotodrafitrasa fototra isika, saingy nambarany fa « mandainga aho raha hilaza fa hoe ho vita izao dia izao izany. Fa tanjona amin’ ny fampandrosoana ny ho avy no kendrena. Efa natomboka ny asa ary tsy ho ela isika dia higoka ny vokatra”. Nitondra fanazavana tamin’ ny vahoaka anefa ny filoham-pirenena fa tsy ho tanteraka ireo raha toa tsy misy ny fiaraha- misalahy, ka noho izany dia anjarantsika rehetra ny milaza fa ilaina ny fitoniana hoy ny filoha raha toa ka hiroso amin’ ny fampandrosoana.
Nambaran’ ireo mponina any an-toerana kosa fa maro ny ezaka izay efa notanterahin’ ny fitondram-panjakana tany amin’ ny faritra izay misy azy ireo, ka tamin’ ny taona 2015 ohatra dia efa nahazo ivon-toeram-panofanana matihanina i Vohipeno, ary tsy izay ihany fa teo ihany koa ny trano fandidiana sy ny fanavaozana ny tranom-pokonolona. Noho izany hoy ireo mponina dia azo heverina fa hitondra soa ho an’ ny firenena ny tetikasan’ny fisandratana izay mijery ny dingana mankany amin’ ny ho avy, satria ny asa dia efa hita taratra fa natomboka. Ankoatra izay dia nanambara ihany koa ny solombavambahoakan’ i Madagasikara Andriantsizehena Benja Urbain, fa ny olona miasa sy mahavita tahaka ny filoha ankehitriny no ilain’ i Madagasikara. Izany hoy izy dia hita taratra amin’ ny fijerena ny ho avy, satria dia ilain’ ireo taranaka mifandimby ny fivoarana izay nentina sy aza tsapain-tanana.